IPad mini mazuva ekufambisa anotama kusvika kupera kwaGumiguru kutanga kwaNovember | IPhone nhau
IPad mini mazuva ekufambisa anotama kusvika kupera kwaGumiguru kutanga kwaNovember
Izvo hazvisi mune zvese zviitiko uye kwete mune ese mamodheru eiyo nyowani iPad mini yakatangwa naApple nhasi, asi iyo iri kure kwazvo kutumira Ivo vanoisa iko kutumirwa kweiyo nyowani modhi yeaya madiki maPads pakati paGumiguru 28 naNovember 9.
Zvine musoro kuti pane nuances kubvira Mune mamwe mamodheru, kutumira kuri pakati paGumiguru 18 ne25. Kunyangwe zvakadaro, aya ndiwo mazuva akawandisa ekutumirwa kweimwe yeaya matsva iPad mini mamodheru. Isu tinonzwisisa kuti chinodikanwa cheaya mamodheru chakakwirira, kunyangwe chiri chokwadi kuti hatitende kuti zvakawandisa kuva nenguva dzakareba dzakadai.
Kushomeka kwezvinhu zvakasvibirira zveiyo mini mini
Kana zviri zvimwe zvese zveApple zvishandiso, iyo mini mini haina kuregererwa kubva ku kushaikwa kwezvinhu zvakagadzirwa pakugadzira. Izvi zvinoonekwa mune zvese zvigadzirwa asi mumakambani makuru ayo anofanirwa kuburitsa yakawanda zvigadzirwa zvigadzirwa zvinonyanya kuoneka. Tora, semuenzaniso, nyaya yemafekitori emota ayo akatofanira kumisa mitsara yekugadzira uye kunonoka vatengi odha kweinopfuura hafu yegore ...
Nekutengesa iyo stock yemamwe mamodheru muzvivakwa zveApple zvitoro kana vane mvumo vatengesi vanopa nguva dzekutumira dzamangwana pane mamwe mamodheru. Iyo yepamusoro yekubata ndeye 256GB modhi iyo inogona kuwanikwa yekutora mangwana kuApple Passeig de Gràcia, muBarcelona. Uyu zvino unonakidza mutambo wekutsvaga wevashandisi kubvira dzimwe nguva kana kudiwa kuri kudzvanywa zviri nani kutsvaga stock muzvitoro zvepanyama pane kutenga online pamhepo paApple chaipo. Wakawana yako iPad mini nenguva?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » IPad mini mazuva ekufambisa anotama kusvika kupera kwaGumiguru kutanga kwaNovember
Apple inopa "iyo Spark" zvinyorwa zvakateedzana zvinoongorora mavambo enziyo idzi
Apple inowedzera gumi nematanhatu mapikicha eApple TV